トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ ROM Works
Lo matshini pa, usoloko imvelaphi inyuselwa ROM. Ngoko ke, yintoni uhlobo lwento nokuba ROM, Ndingathanda ukuthatha jonga kwi esebenza ngayo. Ngenxa ROM kukuba, okanye imisele jackpot, leyo iqulathe inkqubo, ezifana ufikeleleko kunye nokusebenza, oko umatshini, ezifana umatshini umdlalo ebuchotsheni.
Umatshini o jackpot uye inkqubo leloto amathuba ngokupheleleyo kuzo zonke imifanekiso. (Kuyinto nje kuphela. Nawe singenako ukuyiphika ukuba kungenzeka ukuba hit okuba enkulu, njl Horukon ke enyuka ngokuxhomekeke evenkileni.) _ X000D_
onke etafileni yokudlala, apho ukuhlola kumatshini pa ukuba Hodorikyo, ngokuxhomekeke ukuba sihlolwe , kodwa kwakhona kwaye hayi amathuba epheleleyo ezigxile ukwenzela ukuba adlule. Ixabiso
wayezimisele ibe ngalinye, ukuba le yamsikela ukusukela kulaa amanani random, ebizwa amathuba epheleleyo. Ngoko ke, za uhambisa i ROM kukuba luhlobo luni na indlela, siya kuchaza indlela abe hit enkulu. Phakathi ROM, iye wababala ngu isakhelo esinye nokuba kunini na. Ngoko, xa ufikelela ixabiso ethile lwamanani, naye ngokuphindaphindiweyo ukuba abuyele ku 0.
Kule thebhile yokudlala, iibhola ukuba wonke lokwazisa, eqala ngeenxa kumfanekiso ukuba bangene chucker ekuqaleni, phakathi ROM ngelo xesha, leloto kwenziwa, phakathi kwemveliso kunye ukufikelela, okanye uze okanye hit kakade wena endasifaka.
kwaye ngexesha ilotto olandelayo, naye uqalisa ukuba abuyele ku-0, ke lotto ngalo mzuzu yaba ekuqaleni chucker ukugqiba. Oku kungenxa yokuba izinto ezinjalo random ezifana okuphumelela ukuba bajike, linokuba yi nokuba 1 290 imizuzu, engaqondi ukuba eze ngeenxa kusoloko ukujika ukujikeleza 290. E
, ukuba kuya kuba akukho hit okuba enkulu kuyimfuneko, kodwa kunokuba ucinga, ROM kangangexesha elithile, liya kuzama ukuya Chikazukeyo jackpot, nto leyo imiswe matshini. Ngoko ke, okanye amathuba okuba ashaye kwimodeli nganye, kukuba converges ukuba hit okuba enkulu.
loo nto, okanye kukho ixesha xa hit omkhulu rhoqo, xa ngaphandle Ixesha I, kangangokuba akukho okanye apho. Ngokulula Uchaze ubudlelwane phakathi ROM kunye jackpot, kodwa umatshini pa kukuthi, zonke kulawulo ROM iye yabangela.
Reach yantlitha zombini, lotto ngalo mzuzu xa ungena unokuqala chucker Luhlobo olunjani ngumlawuli iyeza luyekisiwe. Ngoko ke, apho ucinezela akho enoba ithuba iqhosha, ayithethi ukuba hit unako sisuswe, andazi nje babe umsebenzi kuphela.
Ngokuqinisekileyo ukufunda hit na, wena awukwazi nokuba nabani na pa parlour yabantu. Le win ngokuqinisekileyo siqinisekiso, kwaye ndicinga ukuba nako ukuqonda ukuba ngcono ekuqaleni bamba.
pa, sithanda zinto kungcakazo okanye abo benza ngcono ukuze ishishini. kuphela onokuyenza, funda igagasi Hit ROM, hayi nje ngento yokuba azame ukuba ukubetha ukuba le meko.
kunjalo, inxalenye Pachinka isenokuba ayithethi ukuba ubuncinane afumane inyanga yen million 1.